नेपालपक्षको सरकारमा जाने तयारी,रामकुमारी झाँक्री सहित को-को बन्दै छन् मन्त्रि ?
काठमाडौं । नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षको समर्थनमा बनेको शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकारलाई एमालेको नेपालपक्षले विश्वासको मत दिने भएको छ ।
लगातार नेपालसँग भइरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री देउवाको भेटको क्रममा एमालेको अवस्थामा सुधारउन्मुख नदेखिएको कारण आफैले बनाएको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर पाँच बर्षसम्म नै संसद ज्यूँदो राख्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । जसको लागि मन्त्रालयसहित नेपालपक्ष सरकारमा जाने भएको छ । त्यसको लागि मन्त्रीहरुको टुंगो लगाउने तयारी छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि एमालेले देउवा सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ । तर सो निर्णय लत्याउदैँ नेता नेपाल अघि बढेका हुन् । खासगरी ओली पक्षले दिइरहेको आक्रामक अभिव्यक्तिको कारण नेपाल पक्ष शंशकित हुने पुगेका हुनन् ।
आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर नेता नेपालले देउवा सरकारलाई विश्वासको मत मात्रै हैन् सरकारमै सहभागी हुने अन्तिम तयारी कुरा बाहिरिएको छ । नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने संकेत यसअघि नै देखाइसकेको थियो । प्रधानमन्त्रीको सपथ खाए लगत्तै शेरबहादुर देउवाले माधव कुमार नेपाललाई उनको निवासमा भेटेर आफूलाई साथ दिए भने अनुसार मन्त्रालय दिने वाचा गरेका थिए । त्यहि अनुरुप अहिले माधव नेपालले आफ्नो समूहबाट को को मन्त्री बनाउने भनेर लिस्ट देउवालाई बुझाएका छन् ।
बालुवाटार श्रोतका अनुसार माधव कुमार नेपालले ७ जना नेताहरुको नाम पठाएका छन् । सोम प्रसाद पाण्डे, मेटमणी चौधरी, रामकुमारी झाँक्री, जीवन राम श्रेष्ठ, विरोध खतिवडा, यज्ञ राज सुनवार र बेदुराम भूषालको नाम माधव नेपालले देउवालाई पठाएका छन् । यी ७ बाट देउवाले ५ वा ६ जनालाई मात्र मन्त्री बनाउने तयारी गरिएको बुझिएको छ । देउवालाई जसरी पनि विश्वासको मत पाउनु पर्ने वाध्यताले माधव नेपालले पठाएको लिस्टका नेताहरुलाई मन्त्री बनाउन राजी भएका छन् । देउवा निकट एक नेताका अनुसार माधव नेपालले पठाएको नाम मध्य एक दुई जनामा देउवा खुशी छैनन् तर माधव नेपाललाई फकाउन भएपनि राजी भएका हुन् ।
माधव नेपाल समूहका अरु नेताहरु भने अहिले देउवा सरकारमा जान हतार हतार नाम दिएकामा रुष्ट भएका छन् । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसंग वार्ता नगरि निष्कर्षमा पुगेर सरकारमा जान हतार गरेकोमा माधव नेपाल संग भीम रावलदेखि योगेश भट्टराई रुष्ट भएका छन् ।नेकपा एमालेका नेता गोकूल बास्कोटाले समेत अहिले सामाजिक संजालमा स्ट्याटस लेख्दै देउवा सरकारको मन्त्री मण्डलमा नेपाली कांग्रेसबाट ९ जना, माधव नेपाल समूहबाट ६ जना, माओवादी केन्द्रबाट ५ जना र जसपाबाट ५ जना समावेश हुने गरि सम्झौता भएको कुरा उल्लेख गरेका छन् । यता जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई पनि सांसदहरुले छोडने क्रम बढ्दै गएपछि वर्तमान सरकार अझै बलियो हुने देखिएको छ ।
यता ओली समूहले पनि नेपालपक्ष सरकारमा जान लागेको पत्तो पाइसकेको संकेत दिएको छ । नेकपा एमालेका नेता गोकुल बाँस्कोटाले एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारमा जाने सहमति भइसकेको दाबी गरेका छन्। उनले शनिबार एक ट्वीट गर्दै ६ मन्त्रालयसहित नेपाल समूह सरकारमा जाने सहमति भइसकेको दाबी गरेको हुन्। देउवा सरकारमा ९ मन्त्रालय कांग्रेसलाई, ६ मन्त्रालय नेता नेपाल समूहलाई, ५ मन्त्रालय माओवादी केन्द्र र जसपालाई ५ मन्त्रालयको भागबण्डा भएको दाबी गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्, ’ट्वीटर ह्याण्डीलको नौटंकीपूर्ण हल्ला सकियो होला कि नाइँ? तर, परमादेश प्रमको गठबन्धन ह्यण्डील चै कांग्रेस ९ं, प्रमुख भाइ कांग्रेस ६ं, कम्फरटेवल कम्युनिष्ट ५ं, जसपा बाह्र भाइ ५, हुने सम्झौता भयो भन्ने छ। परमादेश सरकारको पूर्णता नभै एमाले विवादको अन्तिम पटाक्षेप नहुने। बल देऊ भीमसेन एकता।’ परमादेश सरकारको पूर्णता नभई एमाले विवादको समाधान नहुने उनको भनाइ छ। नेता बाँस्कोटाले माधव समूह सरकारमा जाने दाबी गरेको भए पनि अहिलेसम्म सरकारमा जाने कुनै सहमति नभएको दाबी गर्दै आइरहेका छन्। ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्नमा नेता नेपाल समूहले निर्णायक भूमिका खेलेका थिए।